पारिवारिक व्यवस्था र सम्बन्धविच्छेद मा चीन - प्रवासी व्यवस्था - वकिल को चीन । सबै चिनियाँ वकिल अनलाइन.
पारिवारिक व्यवस्था र सम्बन्धविच्छेद मा चीन - प्रवासी व्यवस्था
म फेला कि अधिक दस वर्ष को अभ्यास मा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार व्यवस्था, बारम्बार सोधे,", म छोडपत्र मा चीन छ ।". पछि बनाउन गाह्रो निर्णय सम्बन्धविच्छेद गर्न, तिनीहरूले विचार गर्न कहाँ र कसरी यो काम गर्न छ । केही विचार फर्केपछि आफ्नो घर देश को लागि सम्बन्धविच्छेद, तर केही विचार मा चीन तिनीहरूले भएको छ जहाँ बानी रहछन एक लामो समय को लागि रूपमा, तिनीहरूले यो विचार गर्न को लागि अधिक सुविधाजनकअन्तर्गत चिनियाँ नियमहरू, त्यहाँ छ कुनै निषेध लागि सम्म तपाईं को लागि विवाह गरिएको छ समय को एक निश्चित लम्बाइ रूपमा, त्यहाँ छ केही देशहरुमा (उदाहरणका लागि छोडपत्र माध्यम अंग्रेजी अदालतको तपाईं हुनुपर्छ विवाह लागि एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी). चीन मा, पनि यदि तपाईं विवाहित हिजो, तपाईं हकदार छन् लागू सम्बन्धविच्छेद लागि आज भने तपाईं विश्वास, आफ्नो विवाह छ भङ्ग-तल । भने तर, एक पति र पत्नी सहमत छैन सम्बन्धविच्छेद गर्न, चिनियाँ अदालतले सक्छ सुझाव सामंजस्य । तथापि, संभावना लागि चिनियाँ अदालतले स्वीकार गर्न सम्बन्धविच्छेद आवेदन मा निर्भर गर्नेछ सन्तोषजनक अदालत अधिकार क्षेत्र छ । क्रम मा को लागि ब्रिटिश र अन्य गर्न सम्बन्धविच्छेद भित्र चिनियाँ कोर्ट, निम्न मध्ये एक को अधिकार क्षेत्र मापदण्ड भेट हुनुपर्छ: ब्रेक डाउन विवाह' सिद्धान्त छ जो चिनियाँ अदालतले पालन गर्नु पर्छ, जब निर्णय मा सम्बन्धविच्छेद । साथै, एक छोडपत्र प्रदान गरिनु पर्छ भने एक पार्टी को विवाह घोषणा हुन हराइरहेको र अन्य पार्टी फाइलहरू एक कार्य लागि सम्बन्धविच्छेद किनभने यो छ । मा एक सारांश छ, को पाठ्यक्रम समयमा सम्बन्धविच्छेद बढ्नु, पार्टी छ जसले आवेदक सम्बन्धविच्छेद लागि प्रदान गर्नुपर्छ पर्याप्त भनेर प्रमाणित गर्न प्रमाण विवाह भङ्ग छ तल. प्रक्रिया गर्दा एक छोडपत्र, चिनियाँ कोर्ट पनि बनाउन सक्छ आदेश विषयमा वैवाहिक सम्पत्ति र व्यवस्था लागि कुनै पनि छोराछोरी । सही सम्झौता वा वैवाहिक अनुबंध हुनेछ, पछि अदालत ले. जहाँ त्यहाँ छैन यो दल एक वा वैवाहिक सम्झौता, चिनियाँ अदालतले साधारण आदर एक आपसी सम्झौता गर्न सम्बन्ध मा परिवार सम्पत्ति र मर्मतका भन्ने गरिएको छ, र दल बीच पुगेको छ । भने एक सम्झौता पुग्न सकेन, चिनियाँ कोर्ट हुनेछ आयातित गर्न आदेश विभाजित सम्पत्ति, प्रदान मर्मतका लागि कुनै पनि छोराछोरी, र बाहिर सेट लागि व्यवस्था छोराछोरीको हेरविचार. मुख्य सिद्धान्त पछि चिनियाँ कोर्ट छ कि 'छोराछोरी' हित' गर्नुपर्छ यो लागू गर्न घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय परिवार अवस्थामा छ । भित्र सम्बन्धविच्छेद बढ्नु, आमाबाबुले गर्न आवश्यक फाइल प्रमाण को समर्थन मा आफ्नो आवेदन लागि बच्चा हेरचाह, उदाहरणका लागि. चिनियाँ अदालत पनि भन्ने सुनिश्चित अधिकार र जिम्मेवारीहरू को आमाबाबुले छन्, खाता मा लिन. अन्तर्गत प्रक्रियागत व्यवस्था पीआरसी, घरेलु मामला छ जो बसे प्रयोग सारांश प्रक्रिया लिन्छ बीच तीन र छ महिना । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा, हुन सक्छ जो सेवा को कागजातहरू विदेशी, र संग्रह को प्रमाण, विदेशी को लम्बाइ सम्बन्धविच्छेद अधिक हुन सक्छ । साथै, क्रस-सीमाना लागि परिवार अवस्थामा, यो अवधि भित्र जो एक न्याय गर्न सकिन्छ अपिल गरेको छ तीस दिन, जबकि लागि घरेलू अवस्थामा, यो पन्ध्र दिन । यो लेख तयार थियो, अधिवक्ता झाओ, साथी को नील व्यवस्था दृढ, पीआरसी.
सुश्री झाओ अत्यधिक अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय परिवार अवस्थामा र गर्ने व्यवस्था मा चीन को लागि अधिक दस वर्ष । सुश्री झाओ लेखिएको थियो र प्रकाशित पुस्तकहरू हकदार कानूनी अभ्यास को अन्तर्राष्ट्रिय परिवार अवस्थामा (प्रकाशित व्यवस्था गरेर प्रेस-चीन) र वकील गरेको अभ्यास मा नागरिक मुद्दा (सह-लेखक, द्वारा प्रकाशित व्यवस्था प्रेस-चीन).
संपर्क हाम्रो अनुभवी वकिल लागि गोप्य र स्पष्ट सल्लाह मा मुद्दाहरू मा विस्तृत लेख छ । तयार गर्न खोज्न कानूनी सल्लाह. बोल्न को एक सदस्य गर्न प्रवासी व्यवस्था आज र प्राप्त स्पष्ट र गोप्य सल्लाह छ । अनुरोध गर्न एक कल फिर्ता प्रविष्ट गर्नुहोस्, आफ्नो विवरण तल फिल्ड र एक सदस्य को हाम्रो टीम कल हुनेछ तपाईं फिर्ता समय मा अनुरोध छ ।.
गुणहरू को एक ठूलो वकील - यी गुणहरू सिर्जना गर्नेछ एक प्रभाव